Ukuqhumisa Abrasives Factory, abahlinzeki - China Ukuqhumisa Abrasives Abakhiqizi
Insimbi yadutshulwayenziwa nge-carbon steel ngokuncibilika nokwakheka. Isetshenziswa kabanzi njenge-abrasives yokuhlanza, i-desclaing, ukulungiswa kwangaphambili kwendawo nokudubula. Usayizi wayo ohlukile uzonquma ukuthi i-ultiate isiqediwe ifinyelelwe ebusweni bento yokusebenza okufanele iqhunyiswe.
Insimbi yensimbiichotshoziwe kusuka kukhabhoni yensimbi ephezulu, etholakala ngezinhlobo ezintathu zobulukhuni. ngesimo se-angular, ukususwa kokungcola komhlaba nokumbozwa ngokushesha nangempumelelo.
Ukunikeza insimbi grit
Amabombo Steel Grityenziwa ngokuchoboza kokuzihlanganisa steel ethwala. It is ekuqaleni ithuthukiswe futhi isetshenziselwe embonini yamasaha wamatshe futhi manje futhi yamukelwa kahle ngenqubo yokuqhumisa ngenxa yokusebenza kwayo okuphezulu.
Sinikezela ngocingo lwensimbi oluvela ocingweni olusha lwensimbi nocingo lwamasondo amadala womabili.
Ukugcina impilo ephakeme yokukhathala ngaphansi kwamandla aphezulu, kwehlisa izindleko zokusetshenziswa.
Ukubhakuza okusanhlamvu okuhle, usayizi ofanayo, akukho okuphukile ngesikhathi sokusebenzisa, ikhwalithi ephezulu yokulunguza.
Okungabizi kakhulu uma kusetshenziselwa ukukhishwa kwesikhumba kwezingxenye zemishini ngobubanzi be-HRC40-50.
Engagqwali Sika Wire Shotyenziwa ngokusika insimbi engagqwali ngocingo. Ingabuyiselwa eminye ibe amamaki ahlukene ngokusho kwamakhasimende ukusetshenziswa okuhlukile.
Insimbi engagqwali kuyinto engagqwali kuyizinhlayiyana emincane. Kakhulu isetshenziselwa ukuhlanza indawo, ukupenda nokususa izinsimbi ezingezona ezensimbi nemikhiqizo yensimbi engagqwali, okwenza ubumbano obufanayo bendawo, ngaleyo ndlela ifaneleke ukwenziwa ngaphambi kobuso ngaphambi kokumbozwa.
TAA isithombe esincane se-carbon bainite steel futhi kubizwe I-LCB steel shot.
Njengomkhiqizi oholayo esithombeni sensimbi, i-TAA Metal iyaqhubeka nokwenza ngcono ikhwalithi yomkhiqizo nokuthuthukisa umkhiqizo omusha kule minyaka edlule. TAA LCB rnixed olwalwenza ngumkhiqizo osebenza kahle ngemuva kocwaningo nentuthuko eyiminyaka eyishumi, okuyinhlanganisela ephelele yobuchwepheshe be-TAA obunamandla nobuchwepheshe bokuphathelene, NJENGOBA imithombo yezindaba yesibhamu efunwayo, i-TAA I-LCB ixubene nolakaisetshenziselwe atl izinkambu eziphathelene nokuqhuma kwesibhamu nokuqhunyiswa kwesihlabathi. Ukusebenza okuhle kukaJt kungasiza abasebenzisi ukuthi bonge u-50% wezindleko zabo zokudubula.
Aluminium ukusika ucingo
I-Aluminium cut wire shot obizwa nangokuthi aluminium shot, aluminium ubuhlalu, i-aluminium granules, i-aluminium pellet.
Zinc usike ucingo
I-Zinc cut wire shot iqanjwe futhi zinc shot, zinc pallet, zinc ubuhlalu, zinc cut-wire blasting. Ithambile kunensimbi, insimbi engagqwali, ukhonkolo noma usike imikhiqizo yocingo.
UBrown Fused Alumina
I-aluminium oxide ensunduihlanganiswe futhi yafakwa phakathi kokushisa okuphezulu kusuka enhlanganisweni ye-bauxite nezinye izinto zokusetshenziswa. Ibonakala ngobulukhuni bayo obuphakeme, ukuqina okuhle nokuma ngosayizi.
Ithusi lisikiwe ngocingokukhiqizwa ngokusika kusuka ocingweni lwethusi kube ama-pellets, ubude obulingana nobubanzi bocingo. okusetshenziselwa kakhulu ukuqhumisa ukwelashwa komhlaba. Iphinde ibizwa ngokuthiithusi lokudutshulwa, ithusi cut wire shot, ithusi shot as cut, ubuhlalu bethusi, imbumbulu yethusi njll. Kungasetshenziswa zombili njengezimo ezisikiwe noma ezibunjiwe zokudubula.